10 Toeram-pisakafoanana steak tsara indrindra eto an-tany | Save A Train
Home > Travel Tips > 10 Toeram-pisakafoanana steak tsara indrindra eto an-tany
Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel UK, Travel Tips
(Last Nohavaozina: 30/07/2021)
Rehefa henonao ilay hoe steakhouse, avy hatrany dia hieritreritra an'i Etazonia na Eropa ianao. Na izany aza, tsy ireo ihany no toerana fiompiana omby sy fihinana steak. Wagyu sy Kobe, izay heverina ho fanapahana hen'omby tsara indrindra eran'izao tontolo izao, avy any Japon. Ary, Mendrika homarihina manokana ireo toerana toa an'i Portugal sy Arzantina.
Ny omby fihinana ahitra amin'ny faritra iray dia hanana tsiro mahafinaritra manokana ho an'io faritra manokana io. Rehefa avy nilaza fa, tapaka steak mangatsiaka dia ny safidy ho an'ny ankamaroan'ny olona tia hena. Notanisainay ity lisitry ny 10 Toeram-pisakafoanana steak tsara indrindra eto an-tany, izay tokony ho anao bucket list raha steak no iray amin'ireo sakafo tianao indrindra.
Anisan'ireo trano steak tsara indrindra eto an-tany, Goodman dia avy any New York. Goodman dia nanokatra ny sampan'i Londres tao 2008, ary ny franchise dia nivelatra tamin'ny toerana telo hafa hatramin'izay.
Nahazo mari-pankasitrahana an'i Michelin Star ilay trano fisakafoanana ary tian'ireo mpiaro azy ireo noho ny volony vita amin'ny hoditra sy ny ala fanahafana azy ao New York.. Mahazo misafidy avy any Espana ny mpanjifa, UK, na fanapahana amerikana. Ny trano fisakafoanana dia mihantitra ny hena eny an-toerana ary mirehareha amin'ny masony.
Mancy's Steakhouse any Toledo, Ohio, dia iray amin'ireo orinasa malaza. Niorina tao amin'ny steakhouse 1921 ary, raha ny any an-toerana no hino, mitohy feno entana hatramin'ny andro 1, na amin'ny andro faran'ny herinandro aza. Torohevitra hizaha ny Taratra toetrandro Toledo alohan'ny hivoahanao any satria mety hiandry kely ianao vao hiditra.
Ny tsara indrindra dia ny mifantina andro iray rehefa mahafinaritra ny toetrandro any Toledo, ary ny fiandrasana any ivelany dia hampitombo ny fiandrasana izay ho anao ao anaty fotsiny, tsy manery anao hiala amin'ny toeran-kafa. Mancy's steakhouse dia manompo ny Angus Certified USDA, ary Angus Prime Steaks izay efa antitra sy mpivaro-kena eo an-toerana. Mianiana amin'ny fianianan'ny hazan-dranomasina aroso eto koa ny mahazatra, indrindra ny foza mpanjaka any Alaska sy ny Lobster aostralianina.
3. CUT nataon'i Wolfgang Puck, Singapore
Wolfgang Puck tsy mila fampidirana. Nanokatra ny trano fisakafoanana aziatika voalohany nantsoina ilay chef malaza amerikana teraka Australiana sy restaurateur CUT ao amin'ny Marina Bay Sands, Singapore, in 2010. Hatramin'ny nanitarana ny fanjakan'ny CUT manerantany, fa ny sampan'i Singapour dia manohy ny tsara indrindra hatrany.
Afaka mankafy an'i Kobe kilasy eran-tany ireo mpiaro, 300-Angus mpamahana voamaina andro, na A5 Wagyu. Ny mampiavaka an'ity orinasa ity dia ny saosy ao an-trano sy fanangonana divay be dia be izay mifanaraka amin'ny steak steak rehetra..
4. Aragawa, Tokyo, Japana
Aragawa any Tokyo dia iray amin'ireo trano steak lafo indrindra eto an-tany. Fantatra amin'ny chef azy ny trano fisakafoanana misy kintana Michelin – Yamada Jiro, izay tsy manompo afa-tsy ny hen'omby Kobe tsara indrindra eto an-tany.
Ny USP amin'ity trano fisakafoanana ity dia ny fiompian'izy ireo omby Tajima karana madio hatramin'ny nanokafana azy 1967. Ny fifehezana kalitao tena tsara sy ny fisafidianana ny fonosana tsara indrindra no mahatonga an'i Aragawa safidy fisakafoanana mihaja.
Ity orinasam-pianakaviana tantanin'ny fianakaviana ity dia mirehareha amin'ny fanamarinana hen'omby voalohany USDA. Izy ireo dia manafatra ny hena tsara indrindra avy amin'ny tapaky ny andrefana ary maina ny taona ao amin'ilay trano. Ity trano fisakafoanana misy kintana Michelin ity ihany koa no tranainy indrindra, rehefa tafaorina ao 1887.
Ity toerana ity dia heverina ho kisary amin'ny sehatry ny fisakafoanana ao New York City ary fombam-pandehan'ny maro. Ny steak Porterhouse, efa antitra amin'ny trano 28 andro, dia lovia atolotra miaraka amin'ny ovy nendasina alemana sy saosy an-trano.
Tarihin'i Paolo Mugnai any Tuscany, ny Antica Osteria dia nanokatra ny varavarany 2007 ary manana rustique, fahatsapana taloha fa hanana traikefa fisakafoanana premium. Ilay trano fisakafoanana dia fantatra amin'ny Bistecca Alla Fiorentina, steak italianina vita amin'ny zanak'omby na ombivavy kely ary lovia lehibe amin'ny sakafo Tuscan.
Ny zava-nisongadina tamin'ny traikefa fisakafoanana tao Antica Osteria dia ny chef manomana ny hena taolana eo alohanao tsy mampiasa afa-tsy menaka oliva Tuscan sy sira kely amin'ny ranomasina.
7. Gibsons Bar & manao steak, Chicago
Any Chicago, ny Gibsons Bar sy ny Steakhouse dia mirehareha amin'ny maha-laharana voalohany fisakafoanana ao amin'ny firenena nahazo ny azy ireo Fanamarinana USDA ho an'ny hen'omby Prime Angus.
Fantatra amin'ny biby fiompy Black Angus ilay trano fisakafoanana, omena katsaka ho an'ny 120 andro ary avy eo maina eo amin'ny toerana hanaovana 40 andro. Mianiana ny hena notapahin'ny WR's Chicago ny mponina eto an-toerana, ovy voaendy indroa amin'ny sisiny, ary ilay sira manitra Gibsons malaza.
Ny Grillhouse any Johannesburg dia raisina ho steakhouse tsara indrindra any Afrika Atsimo. Ny tranokala fanamiana endrika any New York dia fantatra amin'ny fanolorana ravina mihinana zava-manitra kilasy eran-tany sy taolan-tehezana tsara miaraka amin'ny malt tokana sy divay eo an-toerana.
Ity toerana ity dia malaza amin'ny tadin-taolana voadidy miadana, izay atono amin'ny afo midina avy any anelanelan'ny sivy ka hatramin'ny 12 ora. Ny specialities hafa ao an-toerana dia misy ny T-taolana sy ny rump. Ny mampiavaka an'io trano fisakafoanana io dia ny steak hen'omby afrikanina tatsimo miaraka amin'ny mpiasan'ny serivisy tena tsara.
9. La Cabana, Buenos Aires, Arzantina
Araka ny efa nolazainay tao amin'ny intro, I Arzantina dia iray amin'ireo faritra tsara indrindra mamokatra henan'omby matsiro sy be ranony misy tsiro manokana ho an'ny faritra. La Cabana dia iray amin'ireo trano fisakafoanana ankalazaina indrindra ao Buenos Aires, miorina amin'ny toerana misy ny tanàna.
Manolotra steak ho an'ny sakafo maraina ny trano fisakafoanana, sakafo atoandro, sy ny sakafo hariva. Ny tolo-kevitra mora azo dia misy ny steak T-taolana, henan'omby, taolan-tehezana voalohany, ary taolan-tehezana manify. Ny trano fisakafoanana koa dia manolotra fanangonana divay tena tsara any an-toerana handeha miaraka amin'ny steak anao.
10. Caprice, Leon, Espaina
El Capricho any Leon, Espaina, dia heverina ho fivahinianan'ny mpitia hena satria miala amin'ny lalan-kaleha tanteraka, lavitra ny malaza indrindra manintona mpizaha tany any Espaina. Any Leon no misy azy, El Capricho dia tantanan'i Jose Gordon, restaurateur, chef, ary tantsaha.
Ny trano fisakafoanana dia fantatra amin'ny henan'izy ireo nitaiza omby sy omby vavy taloha avy amin'ny saikinosy Iberia teo anelanelan'ny fito ka hatramin'ny telo ambin'ny folo taona. Novonoina indray mandeha, efa maina ny hen'omby 160 andro, izay ambony lavitra noho ny mahazatra. Afaka mankafy T-taolana ireo mpiaro, entrecote, na sirloin namboarina hatramin'ny tonga lafatra tamin'ny vilia afo misokatra, ampiarahina amin'ny vera misy divay tena tsara eo an-toerana.
Ity dia mamarana ny lisitry ny tampon'izao tontolo izao 10 trano steak tsara indrindra. Raha mihevitra ny tenanao ho tia steak ianao, ny tsirairay amin'ireo dia tokony ho ao anaty lisitry ny siny.
eto amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao handamina fitsangatsanganana sakafo any amin'ny 10 Toeram-pisakafoanana steak tsara indrindra eto an-tany.
Te hampiditra ny bilaoginay hoe "10 Toeram-pisakafoanana tsara indrindra eto an-tany" amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fbest-steakhouses-world%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
BestSteakhouses BestSteakhousesWorldwide Carnivore MeatEaters Steak manao steak
A part-time traveler and explorer who loves to share her experience in her writing. I believe in expressing my views firmly and standing by my actions - Afaka tsindrio eto raha Mifandraisa amin'i Rebecca